Resaky ny mpitsimpona akotry : fipasohan-damba maloto | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : fipasohan-damba maloto
Tsy izay pasoka akory no hampamirapiratra ny akanjo efa tokony ho sasana. Na voalaza aza fa mahay mahandro izay manan-tsira na koa ny hatsaran’ny fihaingoana noho ny fitafiana akanjo vao tsy rava pasoka dia na ny sira na ny pasoka dia samy fanampiny fotsiny. Famaranana ny fomba entina hahalavorary ny sakafo raha sira no resahina ary ny akanjo fitafy vokatry ny pasoka.
Samy kojakoja fanampin’ny fikarakaran-javatra izy ireo izany hoe fomba entina ambonin’ny fikirakirana sy fanomanana ho tanterahina na efa nefaina mihitsy aza. Matetika anefa ireo fanampin’ny fanaovan’asa ireo no ifamonjen’ny tomponandraikitra aderadera amin’ny mponina, entiny anakonana ny fototry ny tena andraikitra izay nodinganiny fotsiny fa tsy notanterahiny. Izany hoe mijejojejo fotsiny ny anao lahy ka tsy mipasoka ny efa malama fa mipasoka ny mbola maloto.
Tsy hita heverina ho moramora ny famerenana ny filaminana sy fandriampahalemana eny amin’ny làlana mampifandray vohitra. Na arabe midadasika na làlan-kely mikitaontaona dia samy tsy mampandry saina ny mpitety azy amin’ny fitaingenana fiara. Misy karazana loza izay azo sorohana ny maro aminy nefa mandondona amin’ny mpitaingina na fiara kely manokana izany na fiarabe fitaterana ikambanana. Eo ny loza mitatao ateraky ny fahazoan’ireo mpanakan-dàlana bahana ka anaovany an’izao herisetra rehetra tsy hain’ny mpitandro filaminana tohanana. Eo ihany koa ireo fiara “loza mananika ny arabe” tsy tsara kojakoja manara-penitra. Eo daholo izany, fa ny toe-tsain’ny tsirairay eo amin’ny mpamily fiara no matetika mitarika fitrangan-doza. Samy tsy ampy fitandremana, na ireo mihevitra ho azy mpanjakan’ny familiana fiara na ireny sahisahy ireny nefa resin’ny tsy fahampian-torimaso na difotry ny fahavokisana toaka sy zava-mahadomelina samy hafa. Eran-tany ny pôlisy miantoka ny filaminan’ny fifamoivoizana no mitandro ny tsy fandinganana ny fepetra. Ny fitaovan’izy ireo anefa tsy ampy, ny toe-tsaina koa angamba tsy mifantoka amin’izany fitandrovana izany. Rehefa mitranga anefa ny loza, indreny tazana sy heno ireo kalazalahy milaza azy ho tompon’andraikitra an-tampony, tonga hitondra fanafody. Inona akory ! Manisy sira ny efa mangeroka sy mipasoka ny efa maloto. Tsy miova fa fisotroana kapoaka mangidy sira sy fitafiana gony efa tonta no tohizan’ny mponina ihafihafiana.